Google Oo Ku Digtay Man City, Sabab. - Bulsho News
Xog: Ma Rooble ayaa xalay tanaasulay- Sidee u dhaceen wada-hadalladii...
Ruud Gullit Oo Doortay Xiddiga U Qalma Ku Guulaysiga Ballon...
Google Maps ayaa ku digtay kooxda Man City kadib markii la badalay meelaha wax laga raadiyo iyada oo hadii aad ku qorto Google “Kuraas Madhan”uu si toos ah u soo baxayo garoonka Man City ee Etihad Stadium.
Marka aad ku qorto garoon madhan waxa si toos ah u soo baxaya garoonka Man City ee Etihad Stadium iyada oo la jabsaday Google si looga maadsado kooxda Man City.
Taageerayaasha premier League ayaa ku digtay kooxda Man City iyo taageerayaashooda sabab la xidhiidha garoonka madhan marka ay kooxdu ku ciyaarayso garoonkooda Etihad Stadium.
Dhacdadan ayaa imanaysa kadib markii tababaraha Man City ee Pep Guardiola taageerayaasha kooxdiisa ku dhaleeceeyay in ayna iman kulamada garoonkooda waliba ayna buuxin garoonka marka loo bar-bar dhigo kooxaha waaweyn ee premier Leageu.
Donald Trump asks Florida judge to force Twitter...
Social conservative and economic reformer elected to lead...